uqoqosho lwerayisi kunye nemigaqo-nkqubo yezolimo eNigeria ukuba ibaluleke kangakanani irayisi
ngaphezulu kwexesha eNigeria, I,Ukusetyenziswa kwe pa · tsurpas kumashumi ambalwa eminyaka, Inghas ca irayisi sava inyukayo ibe kukutya kube yinkcitho ekhawulezayo enye kunemveliso..kuphelela Kuyo yonke le nto , Isiphumo sokutya okuxhomekeke koku kuxhomekeka okukhulayo kokungeniswa elizweni. Ngu 2014, malunga nesiqingatha selayisi ebilisiwe eNigeria ingenisiwe. Njengelona lizwe linabantu abaninzi eAfrika emazantsi eSahara (IN), INigeria iye ngokukhawuleza yangenisa irayisi kwilizwekazi kwaye, kutsha nje, Emhlabeni.Oku kuxhomekeka okukhulayo kokungenisa irayisi yeyona nto ixhalabisa urhulumente waseNigeria, Ukusukela kwiminyaka yoo-1980s kwasungulwa iinkqubo ezininzi zokukhuthaza ukuveliswa kwerayisi yasekhaya kunye nokufikelela kulwaneliseko lwerayisi(okanye ubuncinci ukunciphisa ukukhula kokungeniswa elizweni).
Ukuthi ngqo, Iindlela ezintathu eziphambili ezisandula ukwamkelwa ngurhulumente zivavanywa ngakumbi ngokubhekisele kwiimpembelelo zentlalontle yabo yexesha elide zokuguqula uqoqosho lwerayisi kunye nokwenza brand zekhaya zikhuphisane nokungenisa ngaphakathi.:
1. Ukwazisa ngongenelelo lwamacandelo oluntu ukukhuthaza imveliso ye-paddy ngokusasaza kunye nokuthathwa kwembewu engcono nezinye izinto zangoku.
2. Ukuphucula ukuqhubekeka kokuvunwa kunye namacandelo okugaya ukukhuthaza iiprimiyam zodidi oluphezulu kunye nexabiso eliphakamileyo laseburhulumenteni.
3. Ukwazisa ngerhafu yokungenisa elizweni ukunceda ukukhusela icandelo lwerayisi yekhaya.
Urhwebo lwaseNigeria ngeRayisi kuMxholo weHlabathi
INigeria iyeyona nto ithembisa kakhulu ukungena kweli lizwe kwiminyaka elishumi edluleyo 1.1 imiboniso, Isabelo sokungenisa irayisi kwirayisi yangaphandle inyukile 7 ipesenti kwiminyaka yokuqala yenkulungwane yama-21 ukuya 8.2 ipesenti kwiminyaka emihlanu yakutshanje apho idatha ikhoyo (2008-2012). Phakathi kwabangenisi abaphezulu beerayisi, INigeria ilandelwa ngokusondeleyo yiPhilippines, I-Iran, Indoneshiya, kunye neEuropean Union.Izinto zokungenisa elizweni ezininzi eziya eNigeria zivela eThailand, Viyethnam, kunye neIndiya,aba kunye 60 ipesenti yerayisi ethengiswa kwiimarike zehlabathi.
Ukuxhomekeka kwiimarike zerayisi zehlabathi kuzisa imbandezelo enzulu yomgaqo-nkqubo malunga nokuqinisekisa ukhuseleko lokutya kunye nokugcina ulungelelwaniso olusemgangathweni lweendawo zotshintshiselwano lwangaphandle zelizwe. Oku kuyinyani ngakumbi xa ujongene nokunyuka kwamaxabiso, njengoko kwenzeke ngexesha lakutshanje 2008 ingxaki yokutya. Kwirayisi ngokukodwa, amaxabiso anyuke malunga 255 ipesenti phakathi 2007 nango-2008, nangaphezulu kunakwimeko yokugqibela yokutya 1974, xa banda ngo 200 ipesenti (UHeadey kunye noFan 2008).
Ukubaluleka kwezoLimo kunye nokuYila kweMigaqo-nkqubo yeRayisi
Le ngxoxo ingentla ibonisa ukuba ezolimo zidlala indima ebalulekileyo kuqoqosho lwaseNigeria. Indima yezolimo njengomthombo ophambili kwintswela-ngqesho, ukhuseleko lokutya, kwaye ingeniso yasemaphandleni ikakhulu kungenxa yobume bendalo obunobutyebi obuninzi kunye neendawo ezahlukeneyo zemozulu eNigeria ezidityaniswe yimilambo emibini emikhulu yaseAfrika, iNiger neBenue (Umzobo 1.1). Ubutyebi bamanzi acocekileyo bubanzi eNigeria ngenxa yezi ntlambo zimbini zikhulu kunye nezinye izinto ezinkulu zamanzi. Amachibi amakhulu omhlaba asebenza njengezanti zemilambo ecaleni kwale milambo mibini, ekuhlaleni ekubhekiselwe kuyo njenge
iifashama, ezilungele ngokukodwa ukuveliswa kwerayisi. Ngamaxesha athile, nangona kunjalo, ukufikelela kwamanzi kunokuchaphazeleka ngenxa yembalela kunye / okanye izikhukula (Kuku-Shittu et al. 2013).
Nxibelelana nathi ngoqoqosho lwerayisi kunye nemigaqo-nkqubo eNigeria